Horumar Muuqda, Himilo Toosan iyo Hiigsi Dhab ah! | Salaan Media
Muhimadda iyo Mudnaanta koowaad ee Qaranka Jam.Somaliland uu leeyahay waa sugidda ammaanka, adkaynta nabad-gelyada shicibka iyo difaaca jiritaanka Qaranka. Muhimadda labaadna waa raadinta iyo badi-goobka ictiraaf iyo aqoonsi ay Jam.Somaliland ka hesho beesha caalamka. Ka midho dhalinta hanka iyo hiigsiga ummadda Jam.Somaliland, iyo in geed gaaban iyo ku dheerba loo fuulo ambaqaadka ictiraaf raadinta iyo qadiyadda Jam.Somaliland waa himilo ay aaminsan tahay Xukuumad kasta oo talada dalka qabataa. Balse Xukuumad walba leh tabteed iyo xeesheed. Waxaa kala duwan qaabka iyo haannaanka ay Xukuumad walba u iib-geynayso qaddiyadda Jam.Somaliland iyo hilinka ay u marayso xidhiidhka bulshada caalamka.
Saddex sano ayaa ka soo wareegtay markii ay Xukuumadda KULMIYE talada Jam.Somaliland la wareegtay. Filasho iyo yididiillo weyn ayay shicibku ka qabeen in Xukuumadda KULMIYE ay la iman doonto isbeddel muuqda oo dhinacyo badan leh. Xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo waxaa horyaallay hawlo iyo carqalado badan oo kala duwan oo ay ka dhaxashay xukuumaddii talada wareejisay. La wareegii hoggaanka dalka waxaa ku gedaannaa duruufo cul-culus oo u baahnaa in si degenaan iyo ka fiirsashaba leh loo maareeyo. Arrimaha wax ka qabashadoodu ugu mudnaayeen waxaa kow ka ahaa sidii Qaranka Jam.Somaliland looga saari lahaa go’doonkii siyaasadeed ee ka haystay xagga xidhiidhka iyo iskaashiga Beesha Caalamka. M/weyn Ahmed Silaanyo markii ay xukuumaddiisu talada dalka la wareegatay, waxa uu arkay baahida Qaran ee loo qabo in la kobciyo oo kor loo qaado xidhiidhka ay Jam. Somaliland la leedahay bulshada caalamka, taasoo uu yaqiinsaday inay daruuri iyo lagama maar-maanba tahay in la dar-dargeliyo ka midha dhalinta himilada aqoonsi raadiska Jam. Somaliland. M/weynaha Jam. Somaliland waxa uu dib u qiimayn ku sameeyey guud ahaanba qaabka iyo hannaanka Siyaasadda Arr. Dibedda iyo xidhiidhka beesha caalamka ee xukuumadihii isaga ka horreeyey ay kula dhaqmi jireen bulshada caalamka.
Dib u qiimayntaa iyada ah waxa M/weynaha uga soo baxay oo uu arkay inay daruuri iyo lagama maarmaanba tahay in Xukuumaddiisu ay la timaado Qorshe iyo Weji Siyaasadeed oo cusub oo ka duwan kuwii hore u jiray.
2.Siyaasadda Arrimaha Dibedda ee Jam. Somaliland waa mid
Furfuran oo Ku Dhac iyo Dhiiranaanba leh:
Xukuumadda M/weyne Silaanyo waxay la timid Siyaasad cusub oo fur-furan oo ku dhac iyo ku dhiirashoba leh taasoo ka saartay Go’doonkii muddada badan Qaranka Jam.Somaliland ka haystay xagga Siyaasadda Dibadda iyo Xidhiidhka Beesha Caalamka. Ambaqaadkan Siyaasadeed ee Cusub wuxuu dalka iyo dakaba u horseeday magac, mansab, maamuus iyo manfacba. Sidoo kale Xukuumadda M/weyne Silaanyo waxay la timid Siyaasad ay ka go’antahay inay ka dhiidhido wax kasta oo wax u dhimaya magaca, milgaha iyo meeqaamka dalka iyo dadkaba. Xukuumadda hadda talada haysaa waxay la timid Siyaasad ku salaysan wada-shaqayn, iskaashi iyo wax-isdhaafsi. Siyaasad aan sugayn in keliya dunidu iyada fahanto oo ay iyada wax u tarto, balse siyaasad diyaar u ah inay iyaduna dunida wax ku soo kordhiso. Siyaasad u dar-ban diyaarna u ah inay ka shaqayso xilka iyo waajibaadka ka saaran danaha ka dhexeeya mandaqadda iyo beesha caalamkaba dhan kasta oo ay yihiinba.
Muddadaa 3-da sano ah, Waaxda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo waxay soo bandhigtay karti, hawl-karnimo iyo dedaal la yaab leh, waxayna ku guulaysatay inay beesha caalamka si mug leh uga dhaadhiciso in Jam.Somaliland iyo Soomaaliya aan la isku qaldin ee ay yihiin laba dal oo kala duwan; taariikh ahaan, ummad ahaan, xuduud ahaan iyo qaabka maamulka dawliga ahba. Xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo waxay ku suurto-galisay in Jam.Somaliland ay fagaarayaasha caalamka ee lagu gorfeeyo siyaasadda ku soo bandhigto qadiyaddeeda, si dhiirran oo aan gabbasho lahayna ka sheegato garteeda iyo xaqa ay ummadda Jam. Somaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran xor ah oo xaq u leh inuu helo aqoonsiga beesha caalamka.
3. Guusha Xukuumaddu Waa guusha Ummadda JSL!
Wadajirka iyo is-fahanka Bulshada waxaa saldhig u ah in la qiro oo la isku bogaadiyo wixii wanaag iyo horumar soo kordha isla markaana laga garaabo lana saxo wixii laga gaabiyo, caddaalad-darro ama hagar ah ee jira, waana calaamadaha ilbaxnimo ee ummad lagu tilmaansan karo. Qof isagu ama koox iyaga ay Guusha Xukuumaddu ku tallaabsato uga dhigantahay guuldarro oo wanaagga iyo horumarka ummaddooda u soo kordha aan indhahoodu arkayn isuna arka inay iyagu ka qadayaan mooyaane, horumarka iyo wax-qabadka ay xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo muddadaa 3-da sano ah ku tallaabsatay ka weyn wax la qariyo oo la iska indho-tiro. Guusha ay Xukuumadda ku tallaabsato, dhan kasta oo ay tahayba, cidina gaar uma laha oo cidna lagama xigo lagamana sheegan karo! Xukuumaddu markay guulaysato macnaheedu waa Ummadda Jam.Somaliland oo dhan ayaa Guulaystay!!
Ummadda JSL way ka daaleen dibin-daabyo, darxumo iyo dhib intaba. Waxay dedaal dheer u soo galeen inay helaan: Degenaansho, Dugsi iyo Nabad, Dhisme Dawladnimo, Distoor lagu dhaqmo iyo Dimoqraadiyad, Hoggaamiye daacad ah oo ummadda daadihiya, maamulka isku-dubarrida oo dhaqaalahana daryeela. Dedaalkaa midaysan ee horu-marinta dalka hooyo ee rag iyo dumarba loo guntaday, ma aha mid u baaqanaya ama ay hor istaagi karaan Cadawga Jam. Somaliland (meel kasta oo ay joogaan iyo midab kasta oo ay leeyihiinba ) iyo shakhsiyaad iyagu dano gaar ah leh, oo iyagu intaa been iyo dacaayad aan sal iyo raadtoona lahayn mar walba la soo taagan.
Waxaan aaminsanahay in Madaxweyne Ahmed M. M. Silaanyo uu yahay Hoggaamiye Magac, Maamuus iyo Miisaanba ku leh Gobolka Geeska Afrika. Waa Hoggaamiye leh Dulqaad, Dedaal wacan iyo Talo-wadaagba. Isaga ayey ummaddu u dooratay inuu daadeheeyo dalka iyo dadkaba. Wuxuu madaxweyne u yahay dhammaan ummadda Jam.Somaliland meelkasta oo ay joogaanba, inta isaga u codaysay iyo intii aan u codaynba. Waxaa loo baahan yahay in Xukuumaddiisa lala shaqeeyo oo aynu garab is-taagno dedaalka uu ku jiro. Wixii dhalliil ah ee jira ama ay Xukuumaddiisu ka gaabiso, iyadoo la adeegsanayo xeerarka dalka u dhigan iyo xuquuqda Distooriga ah ee Muwaadinku leeyahay, waa inaynu si quman oo toosin iyo dal-dhisba leh ugu sheegno arrimaha baraa-rujin iyo toosinba u baahan.
Madaxweynaheennu wuxuu inaga mudan yahay Xurmo iyo Qadarin iyo Xilka uu inoo hayo oo lagu taageero. Tilmaamaha Togan ee ay Diinta iyo Dadnimaduba ina farayaan ayaa sidaas ah! Xaasha! Inagamana Mudna Aflegaado, Xumaan iyo Xag-xagasho Mindaba!!
D H A M M A A D,
Jam.Somaliland Ha Noolaato, Ka Naxow Nafta Waa!
|W/Q: Architectural-Eng. Hussein Adan Igeh | |Hussein Deyr||UK |